Caadooyinka Venezuela, waa kuwee kuwa ugu caansan? | Safarka Absolut
Ma taqaanaa caadooyinka Venezuela? Sida dalal kale oo badan oo Latin Amerika ah, waxay haysaa xidid qoto dheer caadooyinka iyo caadooyinka caadiga ah. Waa dal ka abuurtay aqoonsigiisa dhaqammo kala duwan oo tahriib ah, laga soo bilaabo xilligii gumeysiga Isbaanishka iyo Boortaqiiska.
Dhammaan dhaqammadaas, oo ay weheliyaan dadka asalka ah, waxay ku darsadeen xoogooda inay abuuraan qaab nololeed in maanta loo aqoonsan yahay inay tahay astaamo sifo markaa waxaan dooneynaa inaan ogaanno waxa ka mid ah caadooyinka ugu muhiimsan ee Venezuela.
1 Caadooyinka caanka ah ee reer Venezuela
2 Heeso kac
3 Qoob ka ciyaarka Cumaco
4 Way ooyeysaa
6 Foornooyinka Caracas
Caadooyinka caanka ah ee reer Venezuela
Waxaan ku bilownay ka hadalka maalin dhaqameed dadka reer Venezuela taas oo ka kooban hawl maalmeed marka aad shaqada aadayso. Tan awgeed, waxaa loo tixgeliyaa waddan casri ah oo rag iyo dumarba ka shaqeeyaan, halka carruurta sida caadiga ah ay daryeelaan nanaasyada ama qof kale oo qaraabo ah. Si kastaba ha noqotee, meelaha baadiyaha ah, caadada caadiga ah waxay tahay in haweeneydu ay guriga joogto oo ay daryeesho dhammaan baahiyaha guriga, oo ay ku jirto daryeelka carruurta.
Ninka ayaa dhankiisa naftiisa u huraya inuu shaqeeyo iyo inuu helo lacag uu ku taageero nolosha qoyskiisa. Sidoo kale waa xaqiiqo in Bulshada Venezuela qiime badan dhaqanka qoyskaoo ay ka mid yihiin hadafyada anshaxa iyo anshaxa. Sidoo kale, ixtiraamka iyo waxbarashadu aad ayey muhiim ugu yihiin dhamaan qaybaha bulshada.
Tani waa a caadada caadiga ah ee Venezuela kaasoo ka kooban hees laga qaado qaar ka mid ah deegaannada dalka. Ku heesaha baraarujinta Iyaga waxaa sameeya rag iyo dumarba, oo waxay ku wareegsan yihiin iskutallaab ubax ah. Si ka duwan dhaqamada kale ee caanka ah, ma jiraan aalado muusiko nooc kasta ha ahaadee oo halkan lagu isticmaalo, markaa waxay ka kooban tahay oo keliya heeso. Dabaaldega laftiisa ayaa loo yaqaan "Kici iskutallaabta".
Qoob ka ciyaarka Cumaco
Xaaladdan oo kale waa mid ka mid ah caadooyinka Venezuela ugu caansan ee loo xuso sharaf San Juan. Waa dabbaaldeg aad muhiim u ah tan iyo markii loo dabaaldego haddii ay dhacdo dhammaan xeebta Venezuela. Waa qoob-ka-ciyaarka oo ay la socdaan durbaanno iyo in kiisaska intooda badan ay yihiin kuwo aan rasmi ahayn.
Waa a qoob ka ciyaarka taas oo aad ula mid ah waltz-ka dhaqameed ee aan wada ognahay, si kastaba ha ahaatee kiiskan waa haweeneyda oo ay tahay inay sameyso dhaqdhaqaaqyo gaar ah oo ujeedkeedu yahay inay lammaanaheeda dhacdo. Waa mid ka mid ah caadooyinka Venezuela, gaar ahaan ku xididaysan Dooxada Aragua. Guud ahaan, waa qoob-ka-ciyaar halkaas oo ay ku yaallo laba meelood, mid yar oo loogu talagalay fannaaniinta iyo qalabkooda, iyo sidoo kale mid ballaadhan oo loo isticmaalo dabaqa qoob-ka-ciyaarka.
Dhinac muhiim ah oo arrintan ku saabsan Caadada Venezuela waa inay la xiriirtaa xaqiiqda ah in ragga ay xirtaan dhar cad, oo ay u dheer tahay koofiyad iyo masar qoorta loogu xiray. Haweenka, dhankooda, waa inay xirtaan blouse cad, oo lagu daro goonno midabbo badan leh.
Iyadoo ay run tahay taas shayaadiin qoob ka ciyaarka Waxay asal ahaan ka soo jeedaan Afrika, Venezuela waxay ku sii jirtey xilligii gumeysiga ka dib. Xaaladdan oo kale, waa dabaaldeg ka dhacaya maalin ka hor Corpus Christi ee magaalada Chuao. Asal ahaan waxay ka kooban tahay qoob-ka-cayaarayaal taxane ah oo loo kala horreeyo siday u kala mudan yihiin: Kabtanka Koowaad, Kabtanka Labaad iyo Sayona. La Sayna Waa in la dhaho, waa dabeecad dumar ah oo uu matalo nin adeegsada maaskaro sheydaan. Ujeedada qoob ka ciyaarkan ayaa ah in shaydaanka lagu cabsi geliyo a Waan tukadaa Magnificat.
Karsadayaasha Caracas Iyagu waa qayb aasaasi ah oo ka mid ah gastronomy-ka Venezuela. Waxaa loo yaqaan inay yihiin jikooyinka qoyska halka ay ka timaado cuntada caadiga ah ee Venezuela. Waxay ku jirtay cunsurradan markii Mestizo Hallaca ay la soo baxday saameyn ku yeelashada Isbaanishka, Madowga iyo Hindida.
Magaalada Mucuchíes Tiro aad u tiro badan oo xaflado ah ayaa la qabtaa kuwaas oo asal ahaan asal ah tan iyo markii ay ka dhaxleen Isbaanishkii xilligii qabsashada. Guud ahaan, ciidaha ugu caansan magaaladan, oo dhaqan ah, ayaa la qabtaa inta lagu jiro bisha Diseembar, taas oo ah marka ay xafladaha cibaadada ee magaalada ay dhacaan. Dhamaadka bishaas, maalinta Santa Cecilia, marka lagu daro maalinta Guadalupe's Virgin iyo maalin quduus ah. Saddexdaan bikradood waxaa si weyn u xurmeeya dadka deggan magaaladan, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah caadooyinka ugu xididdada badan ee Venezuela.
Sidoo kale waa mid ka mid ah caadooyinka Venezuela in kiiskan uu u dhigmo a qaab dhaqameed qoob ka ciyaarka iyo muusikada. Markii hore tani waxay ahayd dabbaaldeg dabeecad xaflad leh, hase yeeshee sannadihii la soo dhaafay waxay si fudud u ahayd muujinta muusikada iyo qoob-ka-ciyaarka. Waxaa xusid mudan in maanta loo tixgeliyo inay tahay astaan ​​astaan ​​u ah aqoonsiga Venezuela, iyada oo aan la xusin in asalkeedu uu dib u bilaabmay bartamihii sanadka 1700 markii ay dadka beeraleydu bilaabeen inay adeegsadaan ereyga "Joropo" halkii "Fandango".
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato caadooyinka Venezuela, wax badan ayaan kaaga tagaynaa Dhaqannada Venezuela sidaa darteed waxaad baran kartaa sir badan oo dhaqankan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Kastamyada Venezuela
xaraash orlymar dijo
Ku jawaab orlymar chacon
Waxaad ilawday kan ugu caansan oo dhan oo uu kujiro midka aad weydiisato kan
inuu si xun uga hadlo dowladda